Muroyi Game Game Pinda uye Nakidzwa kubva Emulator.Online
Muroyi Game. Ndiwo mutambo unonakidza kwazvo, unovandudza kufunga uye ndangariro uye hunyanzvi hwepakati. Ziva nhoroondo yayo, misiyano yayo uye nemabatiro.
Muroyi Game: sei kutamba nhanho nhanho? 🙂
To play Sorcerer Game online zvemahara, zvakapusa tevera iyi nhanho-nhanho mirairo :
Step 1 . Vhura browser yako yaunofarira uye enda kune webhusaiti yemutambo Emulator.online.
Step 2 . Ukangopinda webhusaiti, mutambo unenge watotaridza pachiratidziri. Ungofanire kubhuya tamba uye iwe unogona kutanga kusarudza iyo gadziriso yaunoda zvakanyanya. 🙂
Nhanho 3. Pano mamwe mabhatani anobatsira. Unogona " Wedzera kana bvisa ruzha ", tinya" tamba "bhatani uye tanga kutamba, unogona" Pause "Uye" Dzorerazve "chero nguva.
Step 4. Kuti ukunde mutambo unofanirwa kudya maapuro ese pasina kurova madziro kana iwe pachako . Chero ani anowana mapoinzi akawanda pakupera kwemutambo achakunda.
Chii chinonzi Svikiro mutambo? 🔴
N'anga mutambo uri nyore uye unonakidza kuti iwe ugone kuwana online kuburikidza neino peji.
nyoka-type mitambo ndiyo inonyanya kutsvakwa nekuda kwekureruka kwavo, kutamba uye nekunakidzwa zvakanyanya, uye muroyi ndiwo mumwe wemitambo inosangana neese aya maitiro.
N'anga inokanda mabhora ane mavara kuburikidza nekamuti kake pacheni, iyo inoumbwa neaya mamwe madenderedzwa. Basa reuroyi kuita kuti mabhora ese anyangarike vasati vasvika pagomba rekupedzisira. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kujoina matatu kana anopfuura mabhora eruvara rwakafanana kuti vaputike uye vanyangarika muketani uye vazadzise chinangwa chako.
Muroyi Nyaya ⚫
Mitambo yakaita seSvikiro, iyo inovavarira kuparadza cheni yemabhora nekukanda matema mavara kubva panzvimbo yakatarwa, akagadzirwa muna 1995.
Vakananga vateereri vaive vana. Yakanga iri mutambo wevana , sezvo mashandiro ayo aive akapusa uye mabhora ane mavara aifarirwa nevana vese. asi munguva pfupi, zvakazoitika kuti kwete vana chete vaida kutamba, vakuru vakadawo mutambo uyu . Izvi zvinofadza kushamisika kwevagadziri varo uye dzimwe shanduro dzakagadzirwa nemusoro iwoyo mumwe.
Kuzivikanwa kwayo kukuru kwaikonzerwa nenyaya yekuti inogona kudaro yakaridzwa kuburikidza nekombuta mushure mekutenga iyo cartridge, ndosaka yaionekwa semutambo wepc. Mazuva ano, hazvidi kuti utenge mumuviri mutambo unova kumberi kukuru.
Its dhizaini riri nyore zvinoreva kuti inogona kuridzwa pane chero chishandiso, kungave kuburikidza nemakoni, mafoni, mapiritsi uye kunyangwe yemahara kuburikidza nemapeji epamhepo.
Pasina makuru makuru ekuzivisa, hapana akakura kana akaomarara giraidhi zvinoda, uyu uri nyore, unonetsa uye unovaraidza mutambo.
Mhando dzeMuroyi mitambo 🔵
Muroyi mutambo wakanaka yemitambo yebhora yemavara . Iwe unogona zvakare kuzviziva semitambo yeBubble kana bubble shooter uye icho chinangwa chakafanana, kuparadza cheni kana kuteedzana kwemabhora ane mavara nekukanda matema. Kana iwe ukaisa pamwechete matatu kana anopfuura iwo iwo iwo mavara, iwo anobviswa.
Tichatumidza mitambo inomiririra yeiyi fomati.
Icho chimwe chezva matema ane mukurumbira . Mune ino kesi haisi cheni yemabhora, asi iwo mabhora anoungana padenga rekona uye unofanira kuabvisa ivo vasati vadzika pasi.
Imwe yakasarudzika yemitambo yemavhidhiyo ebhudzi, ine chaizvo yakapusa asi inokurumidza system izvo zvinokumanikidza kuti ufunge nekukurumidza kana iwe usiri kuda kuti muchina ukurove iwe.
Iwo mabhuru anotenderera kutenderera izvo zvine ngozi padyo nepakati. Kudzivirira izvi kuti zvisaitike, iwe unofanirwa kupfura mabhuru kuti uzviise muketani, uchiita mapoka evatatu kana kupfuura kuitira kuti ipfupike. Ukapedza neimwe yeketani uchaenda padanho rinotevera, nekukurumidza uye zvakanyanya kuoma. Iwe uchave iwe wekupedzisira kukunda iyo yakasarudzika nyoka?
Mune ino kesi, pane kunatsurudzwa uye chokwadi ndechekuti matema akaumbwa kunge siyana michero , iyo yaunofanirwa kujoina mumapoka evatatu kana kupfuura kuti uvabvise uye bvisa skrini.
Zvisinei, mutambo uyu une zvinhu zvishoma zvinoita kuti zvionekwe. Semuyenzaniso, sekufamba kunoita nguva mabhubu achidzika , saka kana ukasakurumidza kuita, unogona kuzviwana kumagumo kwemutambo kwamberi kupfuura zvaunotarisira.
Uye kana iwe uchiri kuda kuti zviwedzere kunakidza, edza iyo colorblind maitiro, mune ayo mavara akachinjiswa uye iwe unogona kuve nawo zviri nyore, kana kwete.
Mitemo yemutambo Muroyi 📏
Kutamba Svikiro zviri nyore kwazvo uye zvinonakidza , ndosaka iri mutambo wakanakira vana nevakuru.
Zvese zvatinofanirwa kuita kuita shandisa tsvimbo yemashiripiti kutumira mabhora kunzvimbo chaiyo muketani. Chinangwa chedu ndechekugadzira boka reanenge matatu akafanana mabhora kuitira kuti aya mabhora anyangarike muketani uye nekudaro kudzivirira kuti irege kukura.
Iwe unofanirwa bvisa mabhora ese vasati vasvika kumagumo yenzira uye kutsvedza nepaburi.
Kurumidza nekuti inokurumidza kwazvo! Pane matanho matatu akasiyana ekupedzisa mutambo.
Matipi nezve mutambo Svikiro 🙂
N'anga haina kana mitemo yakaoma, asi hazvireve kuti mutambo unofinha. Muchokwadi, kana usinga tora aya matipi mune account, iwe vangangonamatira mumatanho uye vasingakwanise kuvapfuura.
Iri ndiro zano rekutanga ratinokupa. Pakutanga zvinoita sekunge haina matambudziko uye kuti uri kuzopasa danho nekukurumidza. Asi kwete! Paunenge uchida kuzviona, cheni yemabhora yakakura uye inoenda nekukurumidza zvekuti hauna nguva yekuibvisa uye zvese zvaunowana kuisa mabhora ane mavara munzvimbo dzisina kunaka.
Ehe, isu tatoziva kuti ndicho chinangwa. Asi ndeapi mabhora iwe aunotanga kubvisa?
Pese paunogona bvisa mabhora kubva mumusoro weketani. Rangarira kuti ava ndivo vachatanga kusvika paburi rinotungamira mukuregererwa kwedu, uye izvi ndizvo zvatinoda kudzivirira.
Kanganwa nezvezvazvino, zvirinani sekureba seketani iri hombe.
Chii chiri ichi otomatiki kubviswa? Rumwe rudzi rwechipinga kubva kun'anga? Zvakanaka, kwete. Izvi zvingave zvakafanana nekuve ne sarudzo. Tinofanira kuona izvozvo paunenge uchibvisa ruvara kubva pacheni, iwo iwo mavara anowirirana kumagumo ayo kuitira kuti iwo abviswe pachawo kana iyo yekutanga yanyangarika.
Zvakanyanya kushata? Ndinokupa muenzaniso.
Muketani yedu tine zvinotevera zvinotevera: Yero, lilac, lilac, yero, yero, bhuruu, girini, yero ...
Nzvimbo yakanakira kuburitsa bhora re lilac ichave iri pakati pemalilac maviri pamwechete. Saka, isu tinobvisa lilac ruvara kubva kumutsara, handiti? Uye chinotevera chichaitika ndechekuti kana yero yeruvara ikauya pamwe chete, mipira mitatu yeyero inoenderana iyo yega inonyangarika.
Wakafarira mavhezheni euyu mutambo? Wakaita manomano aya anokubatsira ? Sezvauri kuona, kune matani emitambo uye nzira dzekunakidzwa ne Muroyi mutambo.
Chii chauri kumirira kuti utange kunakidzwa!